Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha qaboojiyaha dhexdhexaadka ah - Shiinaha Warshad qaboojiye jilicsan
Milatariga daboolidda meeldhexaadka ah oo jilicsan
Daboolida tayada milatari ee xirmo baraf badan oo shaqeynaya. Awood ballaaran oo ah 26 gasac. 900D-TPU wax tayo sare leh. Habab kala duwan oo xamuul ah. Nadiifinta biyaha iyo kuleylka kuleylka ah, casri ah oo la qaadi karo, oo ku habboon xaaladaha kala duwan. Kaamam, tamashleyn, hilib dubid, baabuur, iwm, oo leh shaqooyin kala duwan.
Bacda meeldhexaadka ah ee qaboojiyaha jilicsan ee aan biyuhu lahayn
Adag, biyuhu diidan yihiin, leakparaafka oo si fudud loo qaadi karo waa astaamaha lagu garto. Waxay dabooli kartaa baahiyaha qaboojiyaha. Furitaanka ballaadhan ayaa ku habboon qaadashada cuntada, iyo waxqabadka kuleylka sare ee ilaalinta ayaa cuntada ka dhigeysa mid cusub ilaa 72 saacadood.
Bacda meeldhexaadka ah ee Biyo-qaboojiyaha Tayada Sare leh
Xirmada barafka aan biyaha ka hor tagin. Waxyaabaha biyuhu xiraan ee 840D-TPU, awoodda dhexdhexaadka ah ee 30 gasacadood, iyo jirka cawdu u adkeysto ee u adkeysanaya jirka. U oggolow baakadka barafka BD-001-36 inuu kuu noqdo wehelkaaga aaminka ah ee jimicsiga bannaanka, dibedda iyo kaamamaynta.
Boorso qabow oo tayo sare leh oo la qaadan karo oo qabow leh oo leh awood dhexdhexaad ah, maaddada 840D-TPU, 20 gasacadood oo awood ah, oo ku filan in la dhigo cuntada dhabta ah, cabitaanka, miraha aad u baahan tahay, oo aad wali ugu raaxeysaneyso BD-001-41 banaanka Raaxo baraf leh oo ay keento.
Bacda Meel-qaboojiyaha La-qaadan Karo ee Bannaanka
Boorsada barafka moodada oo muuqaal muuqaal leh, laakiin sidoo kale leh tayo milatari. Adeegso 900D-TPU wax-soo-saarka sare ee wax-soo-saarka sare, iyo jiinyeer ilkaha cinjirka ah oo leh qaab-biyood aan fiicnayn. Taangiga gudihiisa sidoo kale wuxuu noqon karaa mid aan biyuhu xirin.
Bannaanka Cuntada qaboojiyaha
Wax tayo sare leh 900D-TPU, awood dhexdhexaad ah oo 24 gasac ah. Waa wax waara, oo biyuhu xiraan, lana qaadan karo dhammaantood waa astaamo. Waxay dabooli kartaa baahiyaha qaboojiyaha dibedda. Furitaanka ballaadhan ayaa ku habboon qaadashada cuntada, iyo waxqabadka kuleylka sare ee ilaalinta ayaa cuntada ka dhigeysa mid cusub ilaa 72 saacadood. Aan kuu oggolaanno inaan ku cunno cunto cusub oo qabow bannaanka.
Bannaanka Qaboojiyaha Cabitaanka Biyaha
Qalabka barafka lagu cabbo ee banaanka Awood ballaaran 26 gasac. 840D-TPU wax tayo sare leh. Gacmo-qabsi, qaabab xambaarsan hal garab. Nadiifinta biyaha iyo kuleylka, mid casri ah oo waara, oo ku habboon munaasabado kala duwan, kaamam, dalxiis, hilib dubis, baabuur, iwm.
Bacda Ilkaha Caaga Bag meeldhexaadka ah biyuhu
20 gasacadood oo ah boorsada qabow ee jilicsan ee TPU la qaadan karo, iyadoo la adeegsanaayo jiinyeer ilko caag ah oo tayo sare leh, biyo-fasal sare leh, keydinta cuntada ilaa 72 saacadood. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaado cuntooyinka badda, miraha, cabitaanka iyo daawooyinka. Ka ciyaar door weyn ciyaaraha jimicsiga, socodka, kaamamaynta iyo howlaha kale.
Dahaaran Bag jilicsan meeldhexaadka ah
Wax tayo sare leh 840TPU, awood dhexdhexaad ah, oo ku habboon munaasabado kala duwan. Haddii aad tahay dalxiis, kaam ama aad ku dubatid barbecue daaradda, waxaad u baahan doontaa sida boorsada barafka qabow ee habboon.